Hamaivana ny fanakanana sy ny fanaintainana amin'ny fanorana mety
Mampifandanja ny fomba fiainana sy ny fialan-tsasatra
Manaiky ny ankamaroan'ny olona fa ny fahasalamana dia iray amin'ireo fepetra takiana amin'ny fiainana raha resaka fiainana afa-po sy misy kalitao. Vao mainka aza miresaka fiainana tsy misy fanaintainana, satria io indrindra ny fanaintainana izay matetika manelingelina ny andavanandrom-piainan'ny olona.
Tsy misy fanaintainana mivantana
Ankehitriny dia azo antoka fa misy vahaolana isan-karazany azo atao raha misy fanafody mety. Ankoatry ny fitsaboana mahazatra dia misy ilay antsoina hoe fanafody fitsaboana hafa, izay nanjary nalaza be.
Fanamaivanana ny fanaintainan'ny otra - © Dan Race / Adobe Stock
Raha ny marina dia teny mamitaka kokoa rehefa heverinao fa ny fitsaboana holistic toy ireo avy amin'ny herisetra, ny zavakanto fanorana, akupunktur ary ny toy izany dia nahomby nandritra ny an'arivony taona maro. Amin'ny ankapobeny, dia mihoatra ny fanasitranana fotsiny amin'ny fanamaivanana ny fanaintainana. Ny fitadiavana ny fifandanjanao manokana amin'ny fiainana, ny fampifanarahana ny vatana sy ny fanahy ary amin'izany dia mamita ny fiainana andavanandro tsy misy fanaintainana araka izay tratra.
Ho an'ity tanjona ity dia azo ianarana tsikelikely ny fomba fiainana mifanaraka amin'izany.
Izay rehetra efa nifampiraharaha tamin'ny vatan'ny angovo olombelona dia mahalala fa ireo antsoina hoe meridiana ireo, izany hoe ireo fantsona angovo ao amin'ny vatana, dia tokony hikoriana malalaka mba hahafahan'ny zavamananaina rehetra mandeha tsara. Ankoatra ny zavatra hafa, manisa ny fahalalahana amin'ny fanaintainana koa ianao.
Raha sendra fanaintainana na aretina amin'ny ankapobeny dia matetika no sakanana ireo lalana ireo ary miseho ny fitohanana ho fanaintainana na famantarana hafa. Zava-dehibe izao ny famahana ireo fitohanana sy fanakanana ireo mba hahafahan'ny vatana sy ny saina mamokatra indray ary mipoitra ny kalitaon'ny fiainana.
Ny fanorana kendrena toy ny acupressure, ny tsindry ary ny fanorana dia manosika manokana eto. Amin'izany no hamafana tsikelikely ny fantsona angovo ao amin'ny vatana ary afaka mivezivezy malalaka ao aminy ny angovo. Mihena ny fanaintainana ary mahatsapa ho tsara kokoa ny vatana sy ny fanahy.
Ny lafiny mikasika ny fahasalamana dia tsy tokony hatao ambanin-javatra amin'izany. Misy teboka angovo sasany ao amin'ny vatana izay mora voan'ny fanangonana angovo. Io no idiran'ny acupressure.
Fa na dia ireo izay tsy marary sy tsy mijaly aza dia afaka manao zavatra betsaka mialoha mba hiantohana izany. Ny fomba fiaina marina dia mitana andraikitra lehibe eto, satria na dia ny fihenjanana sy ny tsy fetezana aza ny fiainana dia tokony ho resaka fialan-tsasatra sy fahatsarana ihany koa.
Zava-dehibe isan'andro ny mahita fifandanjana mety amin'ny tsy fananana fanaintainana. Mety tsy hitovy amin'ny an'ny tsirairay izany, satria na dia tia mihaino mozika mangina aza izy ary manao asa tanana maivana dia aleon'ny iray hafa ny fanatanjahan-tena, ny famakiana, ny fitsangatsanganana sy ny sisa.
Noho izany, isan'andro, amporisihina ny olona hahita ny fandanjalanjany. Ny fanorana dia lafiny iray lehibe indrindra hialana amin'ny fanaintainana.
mpanoratra famoahana mpiasaNavoaka tamin'ny 19. Janoary 2021 15. Jolay 2021 Sokajy fahasalamana, WellnessKeywords Mamoaka ny sakanana, fanorana, fanorana, hozatra, Musculature, mampihena ny fanaintainana, hanala
indray Lahatsoratra taloha: Aza mifoka sigara | FAHASALAMANA
more Lahatsoratra manaraka: Tokony hamaky tsy tapaka koa ny olon-dehibe